सामग्री मार्केटिंग को लागी विकास ह्याकि | | Martech Zone
सामग्री मार्केटिंगको लागि वृद्धि ह्याकि।
बिहीबार, फेब्रुअरी 13, 2014 बिहीबार, फेब्रुअरी 13, 2014 Douglas Karr
हाम्रो एजेन्सी सामग्री पसल नभएको एउटा कारण यो छ कि अनलाइन मार्केटिंगको उद्देश्य सामग्री उत्पादन गर्नु होईन, यो तपाईंको व्यवसायलाई बढाउनु हो। हामी ग्राहकहरूको लागि सामग्री (अधिकत: इन्फोग्राफिक्स र ह्वाइटपेपरहरू) उत्पादन गर्छौं, तर प्रकाशित क्लिक गर्न एक धेरै ठूलो रणनीतिमा एक चरण मात्र हो। तपाईं कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ र कुन प्रकारको सामग्री खोज्दै हुनुहुन्छ बुझ्नु अघि हुनुपर्दछ। र एकचोटी तपाईले सामग्री प्रकाशित गर्नुभयो भने, तपाईले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि यो सिन्डिकेट गरिएको छ र यसको पहुँच अधिकतम बनाउन सही रूपमा बढुवा गरिएको छ।
ग्रोथ ह्याकि is भनेको के हो?
त्यहाँ वेब को लागी उत्पादनको विकासका लागि प्रवेश गर्न कम बाधा छ… तर शब्द पाउन धेरै महँगो हुन सक्छ। प्रारम्भिक चरणको स्टार्टअपहरू पैसा बिना विज्ञापन वा उनीहरूको उत्पादन प्रवर्धन गर्न गैर परम्परागत विपणन रणनीतिहरूको साथ नयाँ ग्राहकहरु लिन को लागी आउँछ। यो को रूपमा परिचित भयो ग्रोथ ह्याकि र यसले SEO, A / B परीक्षण र सामग्री मार्केटि incor समावेश गर्‍यो।
यदि तपाईं आफ्नो ब्लग बढ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सामग्री ह्याकरबाट एक वा दुई चीज जान्न सक्नुहुन्छ। उनी या उनी ट्राफिकले ग्रस्त छन् र विकासमा केन्द्रित छन्। यो इन्फोग्राफिकले तपाइँको भित्री भित्री साइक भित्र एक झलक दिन्छ र तपाइँलाई तपाइँको आफ्नो सामग्री ह्याकर बन्न मद्दत गर्दछ।
यो मान्छे बाट इन्फोग्राफिक मा CoSchedule, वर्डप्रेस को लागी एक शानदार सामाजिक मिडिया सम्पादकीय क्यालेन्डर जोसँग धेरै सुविधाहरू छन्। नोट: इन्फोग्राफिक्स एक शानदार वृद्धि ह्याकिंग रणनीति हो!
टैग: सामग्री मार्केटिङकोस्चेडुलग्रोथ ह्याकि
zkipster: कार्यक्रम र सम्मेलनहरूको लागि अतिथि सूची समाधानहरू
प्रभावकारी वा पत्रकार आउटरीचको लागि सही उपकरण